Waxa muhiim ah marka Tuujiya miiska Ujeedada si aad u aragto garaaf u dhacooda ee qowladda pachinko a
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Waxa muhiim ah marka Tuujiya miiska Ujeedada si aad u aragto garaaf u dhacooda ee qowladda pachinko a
qowladda pachinko Recent, shaashad ballaaran leh mashiinka loo yaqaan data a Lobo, dukaamo in loo xiraa uu noqday badan. dukaanka ee furitaanka hore iyo counter ka hor, iwm, in mishiinka ayaa lagu rakibay, miiska ciyaaraha dhawaan mid ka mid by per xogta hal, iyo jaaniska Ghanna hadda, ilaa dhuftay iyo garaaf guurka heshay yeedhay garaaf u dhacooda a waxaad ka arki kartaa la ruxruxo, sida tirada kacdoonkii.
Sidoo kale, ma jirto tii pachinko Robo xogta, ay timaado la counter xogta on miis kasta ah.
noqon doonaa si looga hortago nooc ka mid ah door, laakiin sii kordheysa waa qadar yar oo ah macluumaad la barbar dhigo Robo xogta. Waa macluumaad badan oo caynkaas ah Robo xogta arkay, laakiin xogta aad rabto in aad ugu aqoonsaday in uu yahay kasta dhiman iyo garaaf guurka heshay ka.
garaaf guurka heshay The, iyo xaaladda maalinta kubada hal qorrax ka soo baxa oo caadaysatay in ay miiska garaafka khadka, waa waxa ka fududahay in la arko. Meelmarin ama waqtiga hit weyn, xaaladda iyo Chan Joogta ah, waxaad eegi kartaa heerka ku xiga qabatimi.
sidii sare iyo hoose ee dhaqdhaqaaqa waa madal cidhiidhi garaafka line this, kubad soo baxay hadda waa mid deggan, waxaa adkaan doonto in ujeedadoodu qabatimi taagan.
※ Dabcan, waxaa hore u yihiin dabcan sidoo kale suurto gal ah in kaliya muddo xoogan oo Horukon markii jaro uu fadhiyo mawqif in hadda deggan.
sare iyo hoose ee dhaqdhaqaaqa dulmiga taagan garaafka this, farqiga daran ee la qabatimo iyo halkii, xitaa maalin adag oo ka hor, marka ma garanayo hirarka muuqan si lama filaan ah uga caroodeen, waa miiska on taas oo ay jirto khatar ah qabatimi. Si kastaba ha ahaatee, taaganyihiin noocan oo kale ah, tan iyo markii ay halkaas sidoo kale, waa u xoogga qarxa, laakiin waa dhinacada ah, waxaan sidoo kale noqon kartaa xaqiiqda ah in madal in la filan karo in ay la afuufo si kale loo dhigo.
Oo, waxaan rabnaa in aad eegto kale si fiican yahay itimaalka madal.
mashiinka pachinko yahay, laakiin waxaa jira ixtimaal ah hit weyn, in matalaa si gooni gooni ah hadda itimaalka ee Ghanna hadda waxaa la, waxa ay u taagnaan doontaa itimaalka. Leexo (halbeeg itimaalka Ghanna) marar badan, guide ah waxa yimid hal Ghanna ku noqon doonaa. Guud ahaan, Tai this 確 Haddii heerka waa 180 ama ka yar, waxa ay noqon doontaa indhaha Ujeedada of madal ah.
noqday in ka badan 180, sidoo kale kor u kacay maal-gashiga ilaa dhuftay, waxa uu noqonayaa ama dheelitirka jilicsan sidoo kale soo kabsaday noqon kartaa sida soo baxay. Si kastaba ha ahaatee, si aad u hesho boosteejo ah oo sida 180 ama in ka yar, xaqiiqada waa arrin weyn.
Intaa waxaa dheer, in robo xogta, waxaad ka arki kartaa pachinko ku kaydiso xogta oo dhan. Haddii aan jar xaqiijinta, ama uu line aad u daran yahay taagan dabacsan itimaalka geeska haysa miiska iyo Adan garaaf, sida ilayska on jasiirad u dhow meesha laga galo, sida badan, sidoo kale waxay noqon kartaa qabsadaan caado ka ganacsiga aad.
First of dhan, go'aan model aad rabto in aad ku dhacay, oo ku dhow heshay in xariiq toosan taagan garaaf guurka kaliya uu noqon karaa mid ama, dooro miiska inta badan inay ku sii kor celceliska ah ee laynka, markeeda, waa taagan xoog garaaf u dhacooda ah ka, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad u dhigma si ay u doortaan miiska u hooseeya oo kaliya istaagi kara itimaalka.
waxaa lagu dhejiyay on board ciyaarta, in kiiska ka mid ah macluumaadka kaliya hortago ma dukaanka pachinko, waxaa laga yaabaa in aadan ka soo bixi itimaalka trapezoidal ah. In
, sababtoo ah waxaa sidoo kale waa counter xogta in muujiyaan doonaa tirada guud ee Kacdoonkii, in habka xisaabinta waxaa hore soo bandhigay ah, fadlan adigu samayn xisaabta. Badan ka Faydno waxa sidoo kale ku dhufan, qofka ku dhuftay si uu u hubiyo itimaalka, wax meesha aad ku guuleysan karto xitaa ka sii badan. , Dooro miiska inta badan si kor sii celceliska ah ee laynka, wakhtigan, waxaad ka garaaf u dhacooda istaagin xoogga badan, waxaa laga yaabaa in kulanka si aad u dooratid miiska yar uun u istaagi kara itimaalka.
, sababtoo ah waxaa sidoo kale waa counter xogta in muujiyaan doonaa tirada guud ee Kacdoonkii, in habka xisaabinta waxaa hore soo bandhigay ah, fadlan adigu samayn xisaabta. Badan ka Faydno waxa sidoo kale ku dhufan, qofka ku dhuftay si uu u hubiyo itimaalka, wax meesha aad ku guuleysan karto xitaa ka sii badan.